Mahajanga no hampiantrano ny Asoimi andiany faha 16 - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ny tanànan’i Mahajanga no hampiantrano ny Asoimi andiany faha 16. Association Omnisport et Interminitériel et Institution no afohezina hoe Asoimi. Ho tontosaina manomboka ny 24 aogositra ary hifarana ny 4 sepitambra ity andiany faha 16 ity. “Zavatra maro no mampiavaka ity andiany ity fa isan’ny tena nimasoana dia ny fampanajana ny lalàna mifehy ny Asoimi” hoy Randriamiarinarivo Abel izay filoha amperinasa. “Ohatra amin’izany ny tsy fanekena ny transfert iray raha toa ka misy ilay taranja eo anivon’ny minisitera” hoy izy. Ny transfert moa dia ny fanomezana alalana ny mpiasam-panjakana iray hilalao any amin’ny minisitera hafa. Lojika tokoa raha toa ka tsy misy an’ilay taranja manavanana an’ilay mpiasa eo anivon’ny minisitera iasany raha toa omena alalana hilalao miaraka amin’ny minisitera hafa izy. Ny antony tsy hanekena ny transfert kosa raha toa ka misy ilay taranja eo amin’ny ministera dia fandrisihana ny mpiasam-panjakana hiaro ny voninahitry ny minisitera iasany. Io no tena antom-pisian’ny Asoimi. Fanamafisana ny fifankatiavana eo anivon’ny samy mpiasan’ny minisitera no tanjona nananganana ny Asoimi ankoatra ny fandrisihana ny mpiasa hitaiza vatana hahazo fahasalamana.
Tsiahivina fa nosokafana tamin’ny fomba ofisialy ny 16 aprily teo ny taom-pilalaovana 2016 ity ary tao amin’ny Lapan’ny fanatanjahantena no nanaovana ny lanonana. Dia samy nampiseho ny fandaharany avy ireo Asoimi isaky ny faritra. Fantatra ohatra fa raha ny Asoimi ao Mahajanga dia ny 4 jona teo no nanomboka ny fifanintsanana.
“Amin’izao famaranana ny taom-piasan’ny ekipa niara-niasa tamiko izao dia faritra efatra sisa tsy mbola nanangana ny sampana Asoimi” hoy ny filoha amperinasa. Zavatra lehibe izany satria mahatsapa ny mpiasam-panjakana fa azy ireo ny toeram-piasana fa tsy toerana fandalovana sy fandraisana karama fotsiny araka ny fanazavana.
Tombanana hahatratra 4 000 ireo mpandray anjara amin’ity andiany faha-16 ity ary taranja enina ambiny folo no hifanitsanan’ireo mpandray anjara amin’ny sehatra nasionaly amin’ity lalao Asoimi andiany faha-16 ity. Noho ny fitombon’ny mpandray anjara dia avy hatrany dia hatomboka ny 24 ny fifanintsanana raha toa ka ny 25 araka ny efa nambara tany aloha ny fanokafana ofisialy. Izany fepetra izany no noraisina dia hahatomombana ny fizotry ny lalao.
Na dia mbola tsy feno tanteraka aza ny enti-manana eo am-pelatanana dia milaza ny filoha fa mizotra araka ny fiiheverana azy ny fanomanana. Mino izy fa ho tonga ara-potoana ny fanampiana avy amin’ny fanjakana foibe na ny minisitera izany na ny prezidansa izay samy nanohana ny Asoimi hatramin’izay.
Finale ﻿CAN 2019 : Parcours et chiffres clés - il y a 56 minutes